Akụkọ - Akụkụ akụ nke anụ ọhịa asaa diamond egweri iko wiil
Nke a 7 inch egweri iko wheelatụmatụ 6 angled, akụ-ekara agba e mere maka egweri ihe na terrazzo n'ala, Ị nwekwara ike iji nke a egweri cup wheel grinder mgbakwunye maka egweri ma ọ bụ prepping ihe, ma ọ bụ wepụ gluu, adhesives, thinset, grout bed, ma ọ bụ ìhè coatings. Maka igwe kọnkịtị, iko egweri nwere ike na-egweri kọnkịrị ike iji wepụ ntụpọ dị elu. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ egweri ihe a maka ma mmiri na ngwa akọrọ.
Ụdị akụkụ ike ike na-enyere gị aka ịbanye n'okpuru mkpuchi ọkụ ma dozie ihe gị n'otu nzọụkwụ. Ụdị a na-egbochikwa iwulite ihe ala dị n'etiti akụkụ nke mere na ị ga-ehichapụ ngwá ọrụ egweri obere oge mgbe ị na-eji ya.
Anyị nwere 10mm, 12mm, 15mm akụkụ hegihts maka nhọrọ gị, ọ bụrụ na ịchọrọ nọmba akụkụ ndị ọzọ anyị nwekwara ike hazie dị ka arịrịọ gị. Grits 6#~300# bụ nhọrọ. Anyị nwere ike chepụta dị iche iche agbụ ka dabara na gị dị iche iche siri ike n'ala elu.7/8", 5/8"-7/8", M14, 5/8"-11 Arbor njikọ ụdị ekwe ka ịwụnye na dị iche iche n'akuku grinders na-eje ije n'azụ. n'ala grinders. Kedu ihe ọzọ, ma e wezụga 7 inch dayameta, anyị na-enyekwa 4", 5" wdg nha.
Nnukwu wheel iko egweri maka ihe ike egweri nke ihe, na iwepu gluu, adhesives, thinset, akwa akwa, ma ọ bụ mkpuchi ọkụ.
A haziri akụkụ akụkụ akụkụ, nke nwere akụ iji nyere gị aka ịbanye n'okpuru mkpuchi ọkụ na prep konti n'otu nzọụkwụ.
Mwepụ ibe ngwa ngwa
Dị maka ọrụ dị arọ
Eriri ma ọ bụ enweghị eriri dị maka iji ngwa ngwa grinder
Maka ngwa mmiri na nkụ
Ezubere maka ndụ ngwa ọrụ dị ogologo
Tụkwasị ntụkwasị obi Bontai Arrow Segment Grinding Cup Wheel iji nyere gị aka ịrụ ọrụ ahụ.
7" wheel ahiri okpukpu abụọ
7 "TGP iko wheel
7" turbo iko wheel
6 "T-seg iko wheel
5" S-seg iko wheel
5 "L-seg iko wheel
4" otu ahịrị iko wheel
10" iko wheel